रुसमा सन् १९०७ जुन ३ तारिखमा जारले दोस्रो राज्य–दुमालाई बलप्रयोगद्वारा अपहरण गरी विघटन गर्‍यो । त्यहाँ बम विस्फोट गरेर संसद भंग गर्ने, सांसदको हत्या गर्ने जुन काम गर्‍यो, यहाँ व्यक्तिहरु त मारिएनन्, हाम्रो २७५ जनाको प्रतिनिधिसभामा केपी ओलीले बम ब्लाष्ट गर्दिनुभयो र यसलाई विघटन गरिदिनुभयो । त्यो घटना र यो घटनाको म सामञ्जस्यता देख्छु।
गोर्वाचोभले जस्तै केपी ओलीजीले बम ब्लास्ट गरिदिनुभयो र यसलाई विघटन गरिदिनुभयो । त्यो घटना र यो घटनाको सामञ्जस्यता म देख्छु । आज नयाँ रुपमा यो घटना प्रकट भएको छ । यो ७१ वर्ष कम्युनिष्टहरुको निम्ति पनि अर्कै त्यस्तै रहेछ कि भन्ने पनि लाग्छ । रुसमा ७१ वर्षमा सोभियत संघ विघटन गर्ने र समाजवाद, कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गर्ने चेष्टा गरियो । त्यसको पात्र गोर्वाचोभ भन्ने व्यक्ति थिए । आज नेपालमा त्यही ७१ वर्षकै समयमा नेकपाको यो उचाईको बीचमा, दुई तिहाईको छेउछाउमा पुगेको नेकपालाई अर्को ढंगले गोर्वाचोभले चालेकै कदम केपी ओलीले चाल्नुभएको छ । यसप्रकारको पछाडि फर्किने, प्रतिक्रियावादतर्फ जाने, यो स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कदमको विरोध गरेर हामीले फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही मार्गमा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसका निम्ति हामीले सबै मोर्चाबाट संघर्ष गर्नुपर्ने खाँचो छ । सांस्कृतिक फाँटले पनि यो कदमको विरुद्धमा फेरि एकपटक संघर्ष गर्न जरुरी छ, विगतमा जसरी नेपाली जनताको बिचमा गएर यहाँहरुले जागरण र नेतृत्वको भूमिका खेल्नुभएको थियो । जनतालाई जागरणमा ल्याउने, अग्रसर बनाउने र आन्दोलनको मोर्चामा उभ्याउने जुन खालको काम गर्नुभएको छ, त्यो कामलाई फेरि एकपटक नयाँ र अझ सशक्त रुपमा लिएर जानुपर्ने खाँचो उत्पन्न भएको छ । मलाई विश्वास छ जनसांस्कृतिक महासंघले यो अभियानको फेरि नयाँ ढंगले नेतृत्व गर्नेछ र यो नेतृत्व अहिलेदेखि नै आरम्भ हुने र आन्दोलनका चरणमा यसको नेतृत्व थप स्थापित हुनेछ र भूमिका खेल्नेछ ।
अहिले ओलीजी र उहाँका मान्छेहरुले कतिपय तर्क गरिरहेको मैले सुनिरहेको छु । केही समय अगाडि नेकपाको केन्द्रीय समिति बिस्तार भएको र ११९९ पुगेको भन्दै ओलीजीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको कुरा बाहिर सार्वजनिक भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिक व्यवस्था के हो भने केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य उपस्थित नभइकन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सक्दैन । अहिले हाम्रो केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्या ४३५ छ । पार्टी एकता हुँदा हाम्रो केन्द्रीय समिति ४४१ हो । पछि ५ जना थपिनुभएछ, त्यसो गर्दा ४४६ भयो । ३ जनाको यसबीचमा मृत्यु भयो, ३ जना व्यक्ति राजदूत भएर जानुभयो, ५ जना संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो । अहिले नेकपाको केन्द्रीय समिति ४३५ जनाको छ । ४३५ जनाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सामान्य कोरमका हिसाबले पनि २१८ जना चाहिन्छ ।
अस्ति पुस ७ गते हामी नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौं । त्यो बैठकमा ३०० केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र अरु केही व्यक्तिहरु आउने प्रक्रियामा पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हामी आउँदैछौं भन्नुभएको छ, यो संख्या अझै बढ्नेछ । ३०० लाई मात्र मान्ने हो भने पनि ओलीजीसँग जम्माजम्मी १३५ जनामात्र बाँकी रहन्छन् । १३५ जनामध्ये वामदेव लगायतका थुप्रै साथीहरु कुनै पनि बैठकमा जानुभएको छैन । यो संख्यालाई घटाउने हो भने करिब २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्र बालुवाटारको बैठकमा गए होलान् भन्न सकिन्छ ।
२५ प्रतिशत व्यक्तिहरु उपस्थित भएको बैठकको कुनै वैधानिकता हुन्छ ? अनि त्यसले कमिटी बिस्तार गरेको कुराको प्रमाणिकता हुन सक्छ ? यो सक्दैन । हाम्रो विधि र व्यवस्था के हो भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य जता हुनेछन्, त्यतातिर नै त्यो पार्टीको वैधानिकता रहनेछ र पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह त्यसैसँग सुरक्षित हुन्छ । यसभन्दा अगाडि हाम्रा सबै कानून र नजिरका सबै व्यवस्था यही नै छन् । त्यसकारण हामीसँग नेकपा छ, हामीसँग सूर्य छ । यो वैधानिक पार्टी हो । यसमा कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन ।
यदि यसमाथि कुनै किसिमको षड्यन्त्र भयो भने स्वाभाविक रुपमा यो धेरै गम्भीर कुरा हुनेछ । तपाईहरुमार्फत् सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने कानून, हाम्रा विधि र व्यवस्थाको दायराभित्र बसेर सबै फैसलाहरु गरियोस् । संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै परिकल्पना गरेको छैन । त्यसकारण संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा पनि हाम्रा विधि र व्यवस्थाहरु हेरेर सही विधि र सही मार्ग फर्काउन म सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यदि विधि र कानूनविपरित गलत बाटोबाट जाने चेष्टा गरियो भने त्यो गम्भीर हुनेछ ।
यसभन्दा अगाडि मैले एउटा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, यदि प्रधानमन्त्रीले अदालत भङ्ग गर्दिएँ भनेर राष्ट्रपतिलाई लगेर सही गराएर अदालत भङ्ग हुन्छ ? यदि अहिलेको संसद विघटनको कुरालाई अदालतले मान्यता दिने हो भने अदालतले के कुरा पर्खेर बसे हुन्छ भने ओलीले कुनैदिन अदालत पनि भङ्ग गर्ने चेष्टा गर्नेछन् । तसर्थ, अदालतले संसद भङ्गका पक्षमा फैसला गरेमा केपी ओलीलाई अदालत पनि भङ्ग गर्ने अधिकार छ भन्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा हुन सक्छ ? सक्दैन । त्यसो हुनाले संविधानको सही ट्रयाक र सही ठाउँमा बसेर यसको टुङ्गो लगाइयोस् ।
निर्वाचन आयोगले कानूनको व्यवस्था र विगतका आफ्नो निर्णय र नजिरहरुभित्र बसेर निर्णय गरोस् । त्यसैले जसो गरेर हेरे पनि नेकपा र सूर्य हामीसँग रहनेछ । योभन्दा तलमाथि हुनेछैन । अहिले एकखालका मान्छेहरु के भनिरहेका छन् भने सूर्य कता हुन्छ, हामी त्यतै बस्छौं भनेर अलिकति दुविधामा साथीहरु हुनुहुन्छ । यो स्थिति केही समय रहन सक्छ । म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै अलमलमा नपरेर, कुनै भ्रममा नपरेर यो कदम प्रतिगमनकारी कदम हो, यो कदम पछाडि फर्किने कदम हो, यो कदमलाई परास्त गर्नका लागि तपाई अलमलमा बस्ने होइन, अहिलेदेखि नै हामीले मोर्चा कसेर सही मार्गमा जाउँ, यो प्रतिगमनकारी कदमलाई हामीले पत्तासाफ पार्न सक्नेछौं । तपाई हामी एकजुट भएर जान जरुरी छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले भनेका होइनन्, हामीमा रहेको कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग गरेर यो सरकारलाई विघटन गरेका छौं भनेर ? उनमा रहेको कार्यकारी अधिकार कसले फालिदिए ? नेपाली जनताले फालिदिए । त्यसो हुनाले ओलीजी तपाई विचार गर्नुस्, तपाईमा रहेको कार्यकारी अधिकारभन्दा ठूलो नेपाली जनताको हातमा रहेको सार्वभौमसत्ताको अधिकार हो । त्यो सार्वभौमसत्ताको नेपाली जनताको अधिकारले यस्ता प्रतिगामी कदमहरुलाई समाप्त पार्नेछ । केही समयको मात्र पर्खाइ हो । तसर्थ, सबै साथीभाइहरु हामी यो अभियानमा लागौं । भोलिको आन्दोलनदेखि हामी सक्रियतापूर्वक लागौं ।
अहिले केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने एक प्रकारको माछाबजार छ । केन्द्रीय सदस्य भएँ भन्ने एक जना मान्छेले मलाई फोन गरेका थिए । मैले सोधें, तपाई केन्द्रीय सदस्य हुनुभएछ, त्यस्तो व्यवस्था त छैन, के हुन्छ त ? अधिवेशनपछि यो १२ सय नै हुन्छ त कमिटी भनेर सोधें ।’ उनले भने, ‘जो जहाँ थिए, ती सबै त्यहीँ फर्किन्छन्, मचाहिँ केन्द्रीय सदस्य बसिराख्छु ।’ कसैलाई विश्वास छैन, यो केन्द्रीय समिति होइन, केन्द्रीय सदस्य पनि होइन, यो माछाबजार हो । यो भ्रममा कोही पनि नलागे हुन्छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरिसकेपछि चुनाव गरेर विभिन्न मान्छेलाई मेयर, अञ्चलाधीश र अरु बनाएका थिए । ती कहाँ गए, ती कहाँ पुगे ? ती सबै पत्तासाफ भए । त्यसैले अहिले हामी त्यहाँ पुगेका छौं, हामी त्यहाँ छौं भनेर परिकल्पना नगर्नुस् । यो भ्रममा कोही पनि साथीहरु नपरौं । यो बाटो सही बाटो होइन, सही मार्ग होइन । यो नै मूल पार्टी हो, यो नै मूल घर हो । जसले घर छोडेर जान्छ, त्यसले अर्को घर बनाउँछ । मूल घरमा बस्नेले नै मूल घरको दावी हुन्छ । हाम्रो टिकट, हाम्रो भविष्य नेकपासँगै छ । हामीसँगै छ । त्यता गएका साथीहरु पनि भ्रमबाट मुक्त हुनुहोला ।
(नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता पाण्डेले सोमबार पार्टीको सांस्कृतिक मोर्चा जनसांस्कृतिक महासंघको केन्द्रीय भेलामा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)